Umatshini wokukhutshwa kombane weFektri - China Umatshini wokukhutshelwa kombane abavelisi, abaxhasi
Isantya sokusika okuphezulu kwe-ZNC Wire Sika i-EDM NgeKhabhinethi kagesi 300 * 200 * 180 Mm
Igama: ZNC EDM Die Machine Yokuntywila Ubungakanani: 600 * 300mm X / Y / Z Axis Ukuhamba: 300 * 200 * 180 Mm Electrode Head: 180mm Max Umthwalo Itafile: 1200kg Curret: 50A Net Ubunzima: 1500kg Controller Axis No.: Z Ulawulo lwe-Axis yangoku i-50A yokusika isantya se-ZNC EDM yokuCofa umatshini weTafile ubukhulu be-600 * 300mm1.Ukulawula i-50A, inamanyathelo ali-19, iindlela ezahlukeneyo zokuchaneka ezinokuhambelana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo. 2.Ukuzenzekelayo ukubala, umnatha kunye nohlengahlengiso -Ukusebenziseka ngokubanzi, emva igalelo langoku, c ...
I-Metal Cutting i-CNC ye-EDM yoZinzo loMatshini i-CNC Spark Sinker i-EDM Machine i-CNC50G
Imodeli: I-CNC-50G Ubungakanani beTheyibhile: 850 * 450mm Ubungakanani beContainer yeoyile: 1370 * 720 * 450mm X / Y / Z iAxis Travel: 500 * 400 * 300mm Max.load yeNtloko ye-Electrode: 150kg Max. Umthwalo weTheyibhile: 1800kg Net Ubunzima: 2500kg Ubukhulu: 2300 * 2770 * 2650mm Isipili esisebenzayo somatshini wokukhupha umbane i-CNC-50G yokulungisa ukungunda 1.Umzimba womzimba womatshini ophethe uxinzelelo lwentlabathi. 2. Ukwamkela uyilo lwe-CAD oluchanekileyo kunye nolwakhiwo oluphezulu lwesakhelo. 3. X, Y ii-asi intshukumo umphezulu kunye "TU ...
INDIBANISO ZNC Micro Wire EDM Machine Die Sinking Ukwenza Metal Ikubumbe ZNC-700
Umzekelo: ZNC-700 X / Y / Z Ukuhamba kweAxis: 700 * 550 * 250mm Ubungakanani beContainer ye-oyile: 1650 * 1100 * 630mm Ubungakanani beTafile: 1050 * 600mm Max. Umthwalo weTheyibhile: 2000kgs Ubunzima bomzimba: I-2950kg iNtloko ye-Electrode: 380mm Ubukhulu: 2000 * 1710 * 2360mm Umatshini wokukhupha umbane ZNC-700 1. Unemisebenzi njengeNqanaba lokuJonga ngokuZenzekelayo, ukuKhangela ilangatye elibomvu, i-alarm enzulu kunye nokusika umbane, ukufumana indawo ephambili. 2.Yamkela i-MOSFET electrocircuit, ngesantya esiphezulu sokulungiswa kwe-3.
Umgangatho ophezulu we-Ultra Fine Procssing CNC EDM Machine 700 * 400mm Ubungakanani beTafile CNC450
Imodeli: I-CNC-40G Ubungakanani beTheyibhile: 700 * 400mm Ubungakanani beContainer yeoyile: 1130 * 710 * 450mm X / Y / Z i-Axis Travel: 400 * 300 * 300mm Max.load Of Electrode Head: 620kg Max.load Of Table: 1000kg Net Ubunzima: 2000kg Ubukhulu: 2050 * 2530 * 2400mm Isipili esisebenzayo somatshini wokukhupha umbane i-CNC-40G yokulungisa ukungunda 1.Uzinzile komngundo ophezulu wokhuseleko kunye neendawo zokulungisa. 2.U-iklasi umgangatho ophezulu ultra-ocoliweyo procssing komhlaba, ilahleko ephantsi, entanjeni eliphezulu. 3.Isetyenziselwa ukuqhubekeka kwezinto ezinzima, ngokuchanekileyo ...
Ukuchaneka kwe-HIgh ye-Industrial Spark Erosion Machine i-17000 kilograms ubunzima besisindo
Imodeli: I-CNC2590N Itafile yokuHamba: 2500 * 900 * 600mm Ubungakanani beContainer yeoyile: 3800 * 1800 * 650mm Ubungakanani beTafile: 2700 * 1200mm Max. Umthwalo weTheyibhile: 10000kgs Ubunzima bomzimba: 17000kg umatshini we-CNC EDM CNC2590N 1. Unemisebenzi njengeNqanaba lokuZenzekelayo, ukuKhangela ilangatye elibomvu, i-alarm enzulu kunye nokusika umbane, ukufumana eyona ndawo iphambili. 2. Sebenzisa i-MOSFET electrocircuit, ngesantya esiphezulu esenziwe nge-3.Ukuba kukho umsebenzi otshintshayo. Imisebenzi yokulwa nokulwa inokongezwa kwi-proce ...
I-3890 * 4400 * 3580mm i-Electronica ye-EDM yoMatshini wokuSika oPhezulu weSantya sokuSebenza
Imodeli: I-CNC1880N Itafile yokuHamba: 1800 * 800 * 600mm Ubungakanani beContainer yeoyile: 3000 * 1500 ** 650mm Ubungakanani beTafile: 2000 * 1000mm Max. Umthwalo weTheyibhile: 6500kgs Ubunzima beNet: 13000kg CNC EDM umatshini CNC1880N 1. Unemisebenzi enje ngeNqanaba lokuZenzekelayo lokujonga, ukuKhangela ilangatye elibomvu, i-alarm enzulu kunye nokusika umbane, ukufumana eyona ndawo iphambili. 2. Sebenzisa i-MOSFET electrocircuit, ngesantya esiphezulu, kunye nelahleko ephantsi ye-electrode 3. Yiba nomsebenzi ongaguquguqukiyo wokutshintsha. Umlo wokulwa ...
Umatshini ozenzekelayo we-CNC EDM 4340 * 4900 * 3590mm Nge-8000kgs Max Load yeTafile
Imodeli: I-CNC2110N Itafile yokuHamba: 2300 * 900 * 600mm Ubungakanani beContainer yeoyile: 3500 * 1800 * 650mm Ubungakanani beTafile: 2500 * 1200mm Max. Umthwalo weTheyibhile: I-8000kgs Ubunzima bomzimba: I-15000kg ye-CNC yomatshini we-EDM i-CNC1880N 1. Unemisebenzi efana neNqanaba lokuZenzekelayo, ukuKhangela ilangatye elibomvu, i-alarm enzulu kunye nokusika umbane, ukufumana eyona ndawo iphambili. 2. Sebenzisa i-MOSFET electrocircuit, ngesantya esiphezulu, kunye nelahleko ephantsi ye-electrode 3. Yiba nomsebenzi otshintshayo ongaqinisekiyo. Ukulwa ...
Ezintathu Axis CNC EDM Machine, 2000 * 1300 * 700mm Oil Isikhongozelo EDM Cutting Machine
Imodeli: I-CNC1260N Itafile yoKhenketho: 1200 * 600 * 450mm Ubungakanani beContainer yeoyile: 2000 * 1300 * 700mm Ubungakanani beTafile: 1250 * 800mm Max. Umthwalo weNtloko ye-Eletrode: 300kgs Ubunzima bomzimba: 5500kg Umatshini oMithathu we-Axis CNC EDM, 2000 * 1300 * 700mm I-Container ye-Oyile ye-EDM yokusika umatshini 1.Ukuqina okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu, umgangatho ophezulu. 2. Xa machining ifikelele kubunzulu obufunwayo, iya kuqhubeka ngokusebenzela inkqubo entle machining. 3. zonke izixhobo zombane zinomsebenzi olungileyo kunye nomgangatho we-4 .Ukuba ubunzulu buhlala bungaguqukanga, ...
Umatshini we-2000L woMbane we-CNC EDM, Umatshini we-PC oLawula uMatshini oSebenzisa uMatshini
Imodeli: I-CNC850N Itafile yokuHamba: 800 * 500 * 400mm Uhlobo lohlobo: I-CNC EDM Ubungakanani boMatshini be-Container ye-oyile: 1650 * 1100 * 600mm Ubungakanani beTafile: 1000 * 600mm Max. Umthwalo weNtloko ye-Eletrode: 200kgs 1000 * 600mm ubungakanani beTheyibhile umatshini we-EDM CNC850N ngomlawuli wePC oshishino. 2. Xa machining ifikelele kubunzulu obufunwayo, iya kuqhubeka ngokusebenzela inkqubo entle machining. 3.Ukuzenzekelayo ukubala, umnatha kunye nohlengahlengiso- Ukulungiselela ngokubanzi ...
Zenzekelayo Spark Erosion CNC Sinker EDM Nge 2300 * 2770 * 2650mm Dimension
Umzekelo: Ukuhamba kwetafile ye-CNC540N: 500 * 400 * 300mm Uhlobo lohlobo: I-CNC EDM Ubungakanani beTafile yoMatshini: 800 * 450mm Umthwalo weTafile: 1800kgs uMthwalo weNtloko ye-Electrode: 150kgs Automatic Spark Erosion CNC Sinker EDM Nge-2300 * 2770 * 2650mm Dimension 1 Iindlela ezahlukeneyo machining ezinokuthi zilungele iimfuno zabathengi ezahlukeneyo. 2.Umbulelo wobuhle obuhle kakhulu kulwakhiwo olusebenzayo olusebenzayo apho izembe lihamba ngokuzimela kwinkxaso. 3.Ukuzenzekelayo ukubala, umnatha kunye nohlengahlengiso- Kwisigaba ...